Fiavonavonana orinasa | Martech Zone
Zoma, Septambra 8, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mora toy ny pizza io fa tsy azony fotsiny.
Tsy misy ny fieboeboana eo amin'ny orinasa. Azonao atao ny mahita ny famantarana azy na aiza na aiza ary afaka miditra ao anaty fikambanana rehetra izy. Raha vantany vao manomboka mieritreritra ny fikambanana fa mahalala tsara noho ny mpanjifany dia manomboka very ny tady. Mahaliana ahy fa orinasa maro no manapa-kevitra fa tena olana io rehefa misy ny fifaninanana tsaratsara kokoa. Amin'izay fotoana izay dia manome tsiny ny fifindra-monina faobe amin'ny fifaninanana izy ireo fa tsy amin'ny tsy fahaizany manokana.
Toy ny hoe mino ny orinasa fa tsy misy Rosa, na Fiverenana amin'ny serivisy. Misy orinasa sasany misafidy mpanjifa goavambe… ary tsy manandrana manamboatra ny olany ary maneho fankasitrahana ny mpanjifa, mandefa dolara bebe kokoa fotsiny izy ireo hahazoana mpanjifa hisolo ireo sisa tavela. Manohy manandrana mameno ilay siny mitete izy ireo mandra-pahatongan'ny tsy misy na inona na inona - ary maty izy ireo. Betsaka amin'ireto orinasa ireto no manana paosy lalina dia lalina, ary manohy mandany ny fahafaha-manao tsara mety nananan'izy ireo tamin'ny fitondrana antsika tamim-pahamarinana sy ara-drariny ary marina.
manambanimbany, miavona, mihomehy, mankahala olona, ​​tia tena, manambony tena, andriana, mpiaro, boriky marani-tsaina, snoboty, misetrasetra, ambony, ambony, ambony toetra - Thesaurus.com - Fiavonavonana
Ireto misy ohatra miavaka amin'ny avonavona amin'ity herinandro ity:
Samsung - rehefa nisy ny mpanjifa naka sary ny fomba mora hanapahana finday dia nanapa-kevitra ny handray fepetra ara-dalàna amin'ny mpanjifa i Samsung fa tsy hanamboatra telefaona.
Katherine Harris - rehefa namoaka ny bilaoginy tamin'ny loza vaovao tamin'ny fampielezan-kevitra izy, dia toa tsy iza ireo mpitsidika azy ireo fa ireo mailaka sandoka avy amin'ilay orinasa nanangana ilay tranonkala.
HP - fa tsy miasa amin'ny fananganana fitaovana tsara kokoa (manana mpandrafitra HP vaovao izahay eo am-piasana izay nosoloina androany… Mihevitra aho fa afaka mamoaka pejy 1 eo anelanelan'ny fanamboarana tsirairay), nanapa-kevitra i HP fa ny fitsikilovana ireo mpiasa ao amin'ny orinasan-dry zareo dia hanome valiny nohatsaraina kokoa. … Misy mila manazava izany amiko. Ny orinasa iray izay tsy manaja ny mpiasan'ny tenany dia tsy iray izay iriko hifaneraserana amiko.
Ask.com - Miezaka manatsara ny fampiasana ny motera fikarohana ao aminy, ny Ask.com dia mandefa blitz haino aman-jery hanandramana sy hisarihana ireo mpampiasa. Maninona ianao no tsy maka an'io vola io ary manao vokatra mendrika hampiasaina? Heveriko fa satria mieritreritra izy ireo fa manana pejy fandraisam-bahiny milay izao dia hampiasa azy ireo bebe kokoa ny olona.
Apple - miaiky fa misy olana 'kely' amin'ny MacBooks mihidy ho azy. Famaritana ny 'kely'? Lafo loatra raha tadidy.
Microsoft - Aza manangana vokatra tsara, asaivo misintona azy fotsiny ny tsirairay fa tsy manontany azy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarihana azy ireo ho 'fanavaozana mitsikera'. aho nanoratra momba an'io. Toa somary madiodio kokoa noho ny noeritreretiko ny fikasan'izy ireo, tamin'ny fanovana ny motera fikarohana nataonao ho MSN tamin'ny fametrahana IE7.
Ticketmaster - Tokony hanamarika an'izany ireo mpandrindra REHETRA… any Canada, dia enjehina ny Ticketmaster satria tsy azon'ny olona sembana sembana ny tranonkalany. Tsy azo idirana tanteraka koa ny tranokalako fa saina mena ity tantara ity. Tokony samy hiezaka hanome serivisy ho an'ny mpanjifa rehetra isika rehetra! Ny tena izy dia olana ara-pitaovana tsotra izao .. tsy misy hafa. Ary koa, io dia fomba iray hanomezana ny mpanjifanao na ny fahatsinjovanao fa miahy anao izy.
Ny tantara sasany kosa dia misy fiafarany mahafaly:
Facebook - miaraka amin'ny famoahana vaovao farany, Facebook tsy nahy niaro ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpanjifan'izy ireo. Matoky aho fa ho sitrana tanteraka izy ireo noho ny fitarihan'ny orinasa.
Digg - ho fiezahana hanome lanja mavesatra kokoa ho an'ny tantara ao amin'ny motera mpamorona otrikaretina mahery vaika, dia napetrak'i Digg tamin'ireo mpampiasa heriny izany, izay mety nampiasa ilay rafitra mba hahazoany tombony manokana. Naka fanapahan-kevitra tsara i Digg tamin'ny fanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa REHETRA fa tsy ny Diggers vitsivitsy izay nahazo fahefana bebe kokoa.
GetHuman sy Bringo / NoPhoneTrees.com dia manangona ireo hery hanomezana fahitana momba ny fomba handraisana rafi-telefaona mandeha ho azy mba hahazoana feo tena izy amin'ny faran'ny telefaona.
ZipRealty - tranonkala iray ahafahan'ny olona mandefa ny hevitr'izy ireo amin'ny Internet momba ny trano izay notsidihin'izy ireo izay amidy.
Ford - na dia tsy mandeha tsara aza ny orinasa dia sahy i Ford. Na dia sahy aza mba hanovana ny sasany dolara doka amin'ny bilaogy malaza!
Manantena aho fa ho hitanao eto ny fifandraisana… orinasa mahomby mihetsika hanatsara ny fifandraisana, vokatra ary serivisy miaraka amin'ny mpanjifany raha toa ka tsy miraharaha, manohitra, manenjika ary manao vinavina amin'ny mpanjifany ny orinasa mahantra. Raha mba tadidintsika daholo izany:
Tsy azonao ny maha-zava-dehibe ny vokatrao amin'ny mpanjifanao.
Tsy azonao jerena mialoha ny fiantraikan'ny fanovana ny vokatrao amin'ny mpanjifanao mandra-pahatanteranao.
Tsy azonao tsara ny fampiasan'ny mpanjifanao ny vokatrao.
Raha tsy miresaka / mihaino / manaja / misaotra / mangoraka amin'ny / mpanjifanao ianao dia misy olon-kafa.
Mandoa ny karamanao ny mpanjifanao.
Notantarainao tamiko izay hivarotanao ahy. Notantaraiko anao ny fomba naniriako azy. Nolazainao tamiko hoe rahoviana aho no mahazo. Natolotrao ahy io rehefa nilaza ianao fa mety. Natolotrao ny zavatra nolazainao fa mety. Natolotrao ny zavatra nangatahiko taminao. Nandoa anao aho. Misaotra ahy ianao. Misaotra anao aho. Handahatra indray aho tsy ho ela.
Mora toy ny pizza io.
Sariitatra amin'ny Internet
Miankina amin'ny Technorati ve ny tianao?
Sep 8, 2006 ao amin'ny 7: PM PM
Hafahafa ny isan'ny vitsy mahazo an'io fotokevitra fototra io. Earl Nightingale dia nametraka izany taloha ela be. Mahazo onitra amin'ny orinasa ianao amin'ny serivisy tena omenao.
Sep 9, 2006 amin'ny 5: 44 AM
Doug tena voasoratra tena tsara, mbola tsy naheno ny sasany tamin'ireo zavatra ireo talohan'izay.
Sep 16, 2006 amin'ny 2: 28 AM
Io fehezanteny io dia mamintina betsaka ny zava-nitranga nandritra ny dot com boom sy bust.
“Misy orinasa sasany manana mpanjifa goavambe? ¦ ary tsy manandrana manamboatra ny olany ary maneho fankasitrahana ny mpanjifa, mandefa dolara bebe kokoa fotsiny izy ireo hahazoana ny mpanjifa hisolo ireo sisa tavela.”
Tiako ilay lahatsoratra.